ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलर सहित यि देशको विनिमय दर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलर सहित यि देशको विनिमय दर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलर सहित यि देशको विनिमय दर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज अमेरिकी डलरसहित ९ देशको मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकका अनुसार आज यूरोपियन यूरो, कुवेती दिनार र बहराइन दिनारको भाउ धेरै र अन्य देशको मुद्राको भाउ सामान्य बढेको हो । डलरको भाउ आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२१ रुपैयाँ १६ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको छ भने यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३१ रुपैयाँ २ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३१ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९२ रुपैयाँ १० पैसा तथा बिक्रिदर ३९४ रुपैयाँ ५ पैसा हुँदा बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ ८७ पैसा तथा बिक्रिदर ३२२ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ९९ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४७ रुपैयाँ ७२ पैसा रहँदा साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
उता युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९९ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ८६ पैसामा कारोबार हुँदा कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ४४ रहेको छ।
घाँटीमा सुनको स्रिक्री, हातमा औंठी र आइफोन बोक्नेहरु राहतको लागि लाइनमा..
कुटनीतिक बाहेक सबै उडानमा रोक